Boqor Burhaan oo ka hadlay Xaalada dalka iyo Xiisada Arinta Doorashada | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Boqor Burhaan oo ka hadlay Xaalada dalka iyo Xiisada Arinta Doorashada
Jan 11, 2021 - 22 Aragtiyood
Garoowe ( Kalshaale ) Boqor Burhaan Boqor Muuse oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka dalka ee 2021-ka oo uu weli ka taagan yahay muran Xoogan.
“Sida ugu dhaqsiyaha badan uguna wanaagsan oo doorasho ku qabsoomi karto inaad ku qabataan doorashada, Beesha caalaka oo marweliba nala garabtaagan sidii Soomaali ay arrimahooda ay u fududeyn laheyd waxaan leeyahay inta beesha caalamka aysan idin soo farogashan farqigi idiin dhexeeya dhameystira,” ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyey.
Boqor burhaan anoo ixtiraam kuu haya mar hore ayaa lagaa rabay inaad lahadasho zinsibaarka garoowe kuu fadhiya ee munaafaq faroole ka dhex hadlo midka kale ee axmed qoraxeey kaasi naf maleh ee waa dameeri dhaan raacday
Beel-daaqe Burhaan waa fiicanyahey hadduu dhahey Reer Cad kama kacoow, tartiib u dhuuqa Canshuurta Eedo Batuulo ee Liibaaneyaasha lagu Liibaaney.
Maanta inuu Inan Layaalkeeni nagula murmo in Xamar ka dhacdo doorasho waa sharaf dhac loo geystay Dhiigii iyo Hantidii loo soo hurey in Villa Xamar lagu soo celiyo Jidkii laga leexiyey 1969.
– Imagine Xamar oo Dhul Jaberti ah
– Imagine Canshuurta 5ta Soomaali oo ka timid Jeebka reer Qurac.
* Xisaabtan LA’AAN iyo XASUUS LA’AANTA Hawiye ayaa keentay Buuqa BURHAANOW BEEL-DAAQOW.
Amar hada kasoo baxay Beesha Lixaad ayaa loogu Wada yeeray dhamaantood Saamilayda iyo Dawlad Goboleedyada iyo Farmaajo.
Warka aan helayo hada waxaa uu yahay in lawada Balamiyey dhamaantood bishaan January 16 keeda 2021 laguna balanshay Xalane.
Farmaajo waxaa kaliya hada kadib u banaan waa Inuu ku baxo tubtii uu ku baxay Cabdulaahi Yusuf !
Dariiq kale iyo wada hadal dambe oo haray ma jirto.
Hobyo Godan dalka yaa leh ma Somali mise beesha 6aad, ha u hadlinsidii adoon beesha 6aad leedahay. Ma haysaa qisadii Nebi Muuse iyo ninkii reer Bnu Israil ee la gumaysanayey, ee markuu u hiiliyey ku markhaati furay. Waxa ka soo baxday “Doqon Nebi Muusaa habaray”; sidoo kale Somalidu waxay leeyihiin “Doqon u gargaarin hana gargaarsan”. Waxa la isku miisaamayaa duul diirata ah oo dawlado kale u shaqaynaya iyo mid ummadda wax u qabanaya oo aan u soo dhac tegin. Beesha 6aad haddii uu Farmaajo ka yeelo inay la maamulaan dalka waa tuug ku biiray tuugadii hore ee dalka beecinayey
Waar anigu yaabaye horta yaa u doortay ninkan boqor Darood?
Bugta dhabayaco badanaa. Kkkkkkkk
Midda xigta imminka dadka muqdisho waa warmoog. Waxaa la sugaaba waa riyaawaddii Soomaaliyeed ee dhici jirtay oo ah kala iibsiga codka beentaa ahaa oo dhacdaa.
Dadkii qorihii cadda xasaystay imminka waa u dagaal iyo xamar oo dab la qabadsiiya.
Bal aynu aragno halkii ay ku dhammaato.
Wallee badowda Soomaali Maryooleey badan baanan garan qarannimo iyo dowladnimo.
Kaama sugayn inaad Xalane gaalada haysataa nooga warranto. Waxaan kaa sugayay inaad ka hadasho waxaad u xadrayn jirtay oo ah in Somalia lagu yaaco si aad xamar u xoogto.
Maxaa iska kaa badalay.
Sheekha Qabyaaladda iyo taariikhda beenta Garqaad
La cidhbintaydii iyo challengekii aan idinku sameeyay weli waa taagan yahay, kama jawaabi kartaan. Marka waad ka gudubteen.
Ogaada weligiin waxaadan difaaci karin lama qoro. GAW
Sheekha Qabyaaladda iyo taariikhda beenta aka Dabshid iyo Garqaad
Taariikh xumadii hore ee aheyd EXILE HERITAGE, ayuu sii kordhiyey unstable Mindset Mr Farmaajo.
Hadduuna Awoowgaa iyo Aabayaasha waligood doorasho qaban oo aysan Xilwareejin ma fahmikartid – QIIMAHA ay leedahay Taariikh ahaan iyo magac ahaan.
* Tuke Raq ma dilo, Cad uu la cararo MOOYAANE.
Waar Farmaajo miyaanuu isumo lahayn, u hadala ama la hadla?
Kkkkkkk horaan kuugu sheegay farmaajo dadka lataliya waa wada hawiye
Dee ayagay utaalaa
Salaad cali jeele
Cabdulaahi shiikh xasan
Shiikh cali wajiis iyo
Cali daacuun kkkkkkk
Waxaan aad tirisay Hawiye maahan ee waa Nacnac Hawiye, sidey Shaley u ahaayeen
Cabdi Shire Cayaar-jecel
Hawiye waxaa u dhaho ONLY HAG GROUP activities.
Horta mid baan ogaaday Daaroodka halkaan ka Qayliyaa kan ugu macquul san baa tahay ilaa xad.
Ninkan aad ka hadashay ee sheegta Boqorka Daarood sheekadiisu waa looma dhama..! Waa Jinni Boqor laakiin qaar baa Waxay leeyihiin Farmaajuu u shaqeeyaa qaasatan Wuxuu qaabilsan yahay arimaha qal qal galinta Siyaasada Puntland.
Wuxuu kaloo tagaa (Self Stale Daarood King) Wadamada Carabta sida Yemen iyo Wadamada Qaliijka asagoo ka dhaadhiciya inuu asalkiisa yahay Carab….! Waxaan kala garan la’ahay ma hunguri Baa u geeyey mise (Identity Crisis ) baa haysata Wadaadka?
Saaxiib arinka ku saabsan Beesha Shanaad ……. Waxa ay damacsan yihiin baan ka hadlay marka taa Kama dhigna in aan taageer sanahay. Maadaama Aan arimaha Soomaaliya ka socdaa aan u dhago daloolo baan is lahaa aqayaarta update bal sii.
War Beel-daaqe iska daa Sakada haka aruursado Carab Shukoweyn
Wiil uu Binu Sacuud ka dhaley Islaan Xabasho Ethiopia ah ayaaba noqon waayey Carab ee waaba ZANZIBAR SANKU LA EGYAHEY ALBAABKII MUDULKII Eedo XAAWO GALEY
Waa xeelad kaa maqan sida Cadka loo raadiyo
Waxaan ilaaway in aan ka hadlo eeda aad ii soo Jeedisay oo ah in aan rabo in Soomaaliya lagu kala Yaaco kadibna aan Xamar xoogo !!
Horta mid ogsoonow …..Soomaali ninka kaliya ee Dhabarkiisa la saaran yahay waa aniga. Farmaajo Reerka kaliya ee uu Madaxweyne u yahayna waa Aniga. Reerka kaliya ee la biishaana waa aniga.Reerka ogol in loo taliyo oo rabo Dawlad Soomaali yeelato waa aniga. Intaa iyo inkaloo Badan.
Marka hadii Soomaalidii kale ay diideen in wax Laysku darsado maxaa diidaya ana inaan Goofkayga xaar xaarto mise waxaad rabtaa in aan Sugno inta Daarood heshiinayo oo ay waliba muuqato in aysan waligood heshiinaynin.
Zubeer horaan kuugu sheegay in lakala danaysto Ayay aaqirka tagi saas bayna danteena iyo mida Soomaalida ku jirtaa.
Kkkkkkk Identity crisis aa ninyahow odaygu maalin dhaweyd Kuwait buu amaanayay oo uu lahaa waan kufaraxsanahay sucuudi iyo qadar bay heshiisiiyeen waliba wuxuu yiri amiirka Kuwait bilad sharaf baan kusiin doonaa. Horta ninyahow jinni boqor manool yahay dhimashadiisa ma maqline
TankLe Irir Samale ayaa eeda leh oo Duqii dhahey Xaggeed ku aroortaa soo maahan inuu sheegto meel aan laheyn Raad Raac.
Wiilka aawey aabihiis,
Wuxuu ku dhintey dagaaladdii 77
Oo aawey adeeradiis
Wuxuu ahaa MADI
Oo aawey Qabiilkiisi
Waa qabiil yar oo dego WAQOOYI u dhow JABUUTI iyo Ethiopia
( NO RAAD RAAC )
Daarood wax farmaajo taageersan waxaa kajira cali daacuun iyo duqbiloow
Odaygaan Boqorka Daarood indha adeeg waa Dhameeyey ! Intuu Qamiis Wayn isku rido ayuu Carabaha naq raac u raadsadaa. Markii hore Yemen Buu tagi jiray laakiin baryahaan wuu ilbaxoo layn Kaloo qaboow buu malaha ka helay Oman iyo Qadar baan filayaa !
Maalin dhawaydna waaba iga yaabiyey waxaan Arkayey asagoo ka hadlaya oo bogaadinaya Heshiiska ay Qadar iyo Saudi Arabia gaareen……
Ar Daarood indha adagaa…. !!!
Saaxiib Jini Boqor inuu dhintaan umalaynayaa Laakiin ma hubo inuu nool yahayna waa suurtagal.
Odayga Daarood fadlan Farmaajo haloo sheego si Mushaar loogu qoro xataa qasnada eedo Batuulo Allaha ka dhigee, sidaan nolol maahee Odayga Kabihii baa kaga dhamaaday Carabta sidoo horay Iyo gadaal ugu socday.
Ali Zubeer ma waxaad diideysaa in go’aanka ugu danbeeya ay beesha lixaad iska leedahay hadii jiho laga waayo ardada ay meesha keensadeen, ku masruufaan kuna ilaaliyaan. Ma waadan xusuusan Kampala Accord.
Dalkani waa Dal ayaan daran oo mas’uuliyiintiisa laga baryayo inay shacabkoodi u turaan. Dal dhan oo siyaasigiisi, isimkiisi, shiikhiisi iyo hogaamiyihiisi ay jiri iyo mooryaan yihiin mid dhifa oo Alle u naxariistay mooyee.
Waxaa xusuustayda Ka go’i la’ gabar Jarmal ah oo aan wada shaqayn jirey baan maalin waxaa u soo galay ayada oo timihu si ugu qariban yihiin, markaasaan waxaan Ku iri maxaa timahaaga saan u galay? Waxay iigu jawaabtey biyo cusbo leh baan Ku qubeystaa oo ayagaa timiha iga qaribay. Markaasaan waxaan Ku iri oo maad biyo macaan gadatid dadku saasay sameeyaane. Waxay igu tiri Cabdiyoow dad baa gaajo u dhimanaya Anna ma biyo aan timahayga Ku qurxiyaan lacag Ka bixinayaa.
Gabadhii saas aheyd wadanki waa laga cayrshay oo waxaa laga qoray PNG letter, markay diidey xoogaa ay hay’ado Ka soo qaaday in lagu qayilo. Gabadhaasi dhalasho ahaan waa gabar reer Yurub ah, diin ahaan waxay aheyd qolada atheist oo aan diinba haysan, hadana waxa lagu cayriyey (waryaan xoolaha masaakiinta la dhicin) Kan ay Ka horeynaysana waa mas’uul Soomaaliyeed oo waliba Muslim sheeganaya.
WCS bro ina Colow
Akhrintaada waxbadan baan ka jira. Dalkan waa iska baylah ay maamulanayaan daanyeero addoomo u ah daanyeerta Xalane.
War ka xishooda boqorka daarood iska daaye wuxu
Matala soomali oo dhan mana galo arimaha yar yar
Ee aad isku haysatan wuxuu ka hadla Qadiyadka
Taabanaya caalamka wuxuu dhisa sharafta…dadka
Somaliyed waa boqortooyo guun ah oo ku caan
Baxday inay xoojiso xirirka calamka la leeyahay
Mid waa khiyaali.. Dalka waan wada lenahay ee reer keliya ma laha
Midna waa run maamulgoboleedadda hirshabeele, galmudug iyo KOONFUR galbeed waa dad bisil oo og xaqiiqda
Jubbaland iyo budhland waa qaaqlayaal u adeega dano nin kale madaxdooduna waxay keliya arkaan maanta waxa horyaal maba dareemo karaan waxa Soomaaliya ku xeeran waxay keliya ka fekerayaan yaan nin reer hebel ahi inoo talin.. Haddaba xaqiiqdu waxay tahay sidan.
Ma jiro qabiil isku Dan ah waxaase jira danlay qabiilka ku adeegata
Qabiil walba wuu garan karaa faa, iidada ugu jirta Soomaaliya oo degta oo dowladeedu hana qaado waa nabad guud waa degenaansho siyaasadeed balse labada maamul ee Jubbaland iyo Budhland waxay rabaan sumaddii geelooda Madaxweynahana waxay u arkaan inuusan xaqba u lahayn inuu u taliyo…markaa waxaan oran lahaa cidna kama caqli badnidin cidna kama badnidine raaca Hogaanka DOWLADDA FEDERALKA AH qaatana maamulgoboleedadda kale xalkooda waayo wey idinka caqli fiican yahiin weyna idinka muwaadin San yihiin.. Midna ogaada haddaydaan raacin waad burburi doontaan waayo waxaad tihiin maxaysato macno darran oo masuug badan kuna nool been iyo huuhaa wax aad aaminsantihiinna ma jirto xataa qabiilka aad sheeganaysaan.. Siyaasiyiintiinu waa igu shubo mar waxaad tihiin kenyaati berrina waxaad tihiin imaaraad shalay a tegre.. Ugu danbayn Boqorka la sheegay yuu u yahay boqor bilaa edeb